Huawei Watch Fit vaovao, famantaranandro ara-panatanjahantena misy GPS sy maro hafa | Androidsis
Huawei Watch Fit, ilay smartwatch vaovao mora vidy efa natomboka tamin'ny GPS, efijery AMOLED ary maso ny tahan'ny fo
Huawei dia iray amin'ireo orinasa sinoa manana ny fisiany lehibe indrindra amin'ny sehatry ny akanjo azo anaovana ary iray izay niverina tamin'ity indray mitoraka ity hamaky ny finday vaovao, izay tsy iza fa Watch fit, smartwatch fanatanjahan-tena izay mampatsiahy antsika kely ny Apple Watch, satria manana endrika mitovy aminy izy io, saingy mazava ho azy fa lava kokoa, mazava ho azy.
Ity famantaranandro ity dia miavaka indrindra amin'ny fananana efijery teknolojia AMOLED, izay holazainay amin'ny antsipiriany etsy ambany. Ny teboka matanjaka iray amin'izany dia ny vidiny, izay latsaky ny 100 euro ary mampitovy azy iray amin'ireo smartwatches mora indrindra amin'ny marika, manintona kokoa noho ny Huawei Watch GT 2 amin'ity fizarana ity, ilay famantaranandron'ilay orinasa izay nambara tamin'ny volana desambra lasa teo izay efa ho 250 euro.
1 Fampisehoana sy tsipiriany momba ny Huawei Watch Fit vaovao, rindrambaiko finday mora vidy ary be ny tolotra
Fampisehoana sy tsipiriany momba ny Huawei Watch Fit vaovao, rindrambaiko finday mora vidy ary be ny tolotra
Ny Huawei Watch Fit, ho fanombohana dia manana ny efijery AMOLED voalaza etsy ambony, izay amin'ity tranga ity dia misy diagonal elongated 1.64 santimetatra ary vahaolana izay manohana azy 280 x 456 teboka, izay ahafahana mampitombo ny pixel dia 326 izy io dpi, mitovy amin'ny efijery Apple Watch, ary misy tahan'ny 70% ny tahan'ny efijery noho ny zava-misy fa tsy dia tononina loatra ireo bezela mitazona azy.
Mila manampy an'io isika ny tontonana miaro azy dia 2.5D, ho an'ny sisin'ny malama, ary mahatohitra ny rangotra sy ny karazana fanararaotana rehetra. Tsara ihany koa ny manamarika fa malefaka sy miloko feno izy; nanantena izahay fa tsy ho kely noho izany.
Etsy an-danin'izany, raha ny momba ilay chipset an'ny processeur izay manome sakafo azy dia tsy misy ofisialy, saingy ny fivoahan'ny lasa dia nanolo-kevitra fa ny Kirin A1 no entiny ao ambanin'ny saron-dohany, ary io no eritreretinay. Toy izany koa, ny azo antoka dia ny famantaranandro marani-tsaina dia tonga miaraka amin'ny bokotra tokana izay miasa ho toy ny bokotra herinaratra ary hampavitrika ilay fitaovana, ary koa mirehareha amin'ny fanohanana ny tarehy miambina enina miaraka amin'ny asany Fampisehoana an-tsary foana (Miseho foana) izay hampiseho fampahalalana na dia tsy miasa aza ny famantaranandro.
Ny fahaizany RAM sy ny toerana fitahirizana anatiny dia tsy fantatra ihany koa, saingy nanambara izany ny orinasa Ny baterian'ny Huawei Watch Fit dia afaka manome elanelam-potoana hatramin'ny 10 andro amin'ny fampiasana antonony, saingy ahena ho 7 andro eo ho eo miaraka amina iray mafy. Amin'ny alàlan'ny GPS alefa, ny smartwatch dia maharitra 12 ora an-tongotra fotsiny.
Ny GPS voalaza etsy ambony dia natsangana tao anaty smartwatch, noho izany dia tsy mila mampiasa telefaona finday ianao raha te hahazo metrika. Ho setrin'izany, ny Watch Fit dia mahazaka rano 5 ATM (50 metatra), sensor ho an'ny tahan'ny fo tohanan'ny algorithm AI izay mahatonga azy ho marani-tsaina, arak'izay lazain'ny orinasa, sy ireo sensor vaovao manampy anao hampiofana. Tsara indrindra amin'ny fanomezana tena izy -mebetika metatra, fanombanana ara-tsiansa ny vokatry ny fiofanana ary fitarihana vokatra tsara kokoa.
Ny smartwatch koa dia miaraka amin'ny sensor 6-axis IMU (accelerometer sy gyroscope), sensor capacitive, ary monitor light ambient. Azonao atao ihany koa ny miditra amin'ny rindrambaiko fahasalamana Huawei hanarahana ny angona data momba ny fahasalamana.
Misy endri-javatra an-tsambo hafa ny fahitana ny saturation oxygen ao amin'ny ra SpO2, mpanaraka tsingerim-bolana, Huawei TruSleep 2.0 ho an'ny fanarahana torimaso tsara kokoa, ary TruRelax hitazomana ny metatra adin-tsainao. Ny sasany dia fampahatsiahivana momba ny hafatra SMS, antso ho avy, hetsika amin'ny kalandrie ary fampiharana media sosialy hafa. Ho fanampin'izany, miaraka amin'ireo rindranasa sy widget ilaina rehetra mba hananana fifehezana tsara kokoa amin'ny filalaovana mozika, fakana sary, fitadiavana ny telefaonanao, ary koa ireo fiasa hafa toy ny toetr'andro, fanairana, famantaranandro, famantaranandro ary fanilo.
Ny Huawei Watch Fit dia natomboka tany amin'ny Emira Arabo Mitambatra ary hovidiana any manomboka ny 3 septambra amin'ny vidiny 399 UAE dirhams, izay mitovy amin'ny 91 euro eo ho eo no hiova.
Tsy misy fampahalalana momba ny fisian'ny smartwatch ho an'i Eropa sy ny eran'izao tontolo izao, saingy azo antoka fa atolotra any amin'ny faritany hafa izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Huawei Watch Fit, ilay smartwatch vaovao mora vidy efa natomboka tamin'ny GPS, efijery AMOLED ary maso ny tahan'ny fo
Ahoana ny fomba hanovana ny ambadiky ny antso an-tsarinao ao amin'ny Facebook Messenger Room